नाक असाध्यै चिल्लो र सेतो खिल आएर हैरान हुनुहुन्छ ? आउन नदिन अपनाउनुहोस् यी उपाय – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/नाक असाध्यै चिल्लो र सेतो खिल आएर हैरान हुनुहुन्छ ? आउन नदिन अपनाउनुहोस् यी उपाय
4,170 1 minute read
नाकदेखि आँखाको मुनिसम्मको भागमा ‘सिवाईसेस ग्रन्थी’ हुन्छ । यो ग्रन्थीले शिवम नामक चिल्लो पदार्थ उत्पादन गर्छ । यस्तो चिल्लो पदार्थ छालाबाट सजिलै बाहिर जान नसके पछि, काला, सेता खिलको रुपमा परिणत हुन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
सन्तुलित आहारको सेवन गर्ने ।अरुले भनेको भरमा बजारमा पाइने जुन सुकै क्रिमको प्रयोग वा जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने ।यदि धेरै समस्या आयो भने चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम आौषधि सेवन वा अन्य तरिका अपनाउनु पर्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
तपाईंको कपाल फुलेर हैरन हुनुहुन्छ ? मेहेन्दी हैन, यी उपायबाट बनाउनुहोस् केही दिनमै कालो